Weather Maps & Storm Radar - The Weather Channel 9.10.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 9.10.0 လြန္ခဲ့ေသာ2ပတ္က
Application မ်ား ရာသီဥတု Weather Maps & Storm Radar - The Weather Channel
Weather Maps & Storm Radar - The Weather Channel ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
နေရောင်သို့မဟုတ်မုန်တိုင်း - သတ္တိအဆိုပါမိုးလေဝသ Channel ကိုတစ်ဦးက IBM စီးပွားရေးနှင့်အတူအားလုံးရာသီဥတုအခြေအနေ။ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှရေဒါ updates များကို Get နှင့်သင့်ဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကိုထံမှတိကျသောမြေပုံပေါ်တွင်ဒေသခံရာသီဥတုစစ်ဆေးပါ။ သင့်ရဲ့ရာသီဥတုမြေပုံနှင့်ဒေသခံမိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်နှင့်အတူရှေ့ဆက်မယ့်အဘယ်အရာကိုကိုင်တွယ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေရယူလိုက်ပါ။
ဒေသခံမိုးလေဝသရေဒါများနှင့်မုန်တိုင်း tracker တွင်တိုက်ရိုက် - မရရှိနိုင်သင်သွားလေရာရာ၌! သငျသညျယုံကြည်မှုနှင့်အတူသွားလာနိုင်အောင်, သင့်နေ့စဉ်ဒေသခံမိုးလေဝသမြေပုံ, ဝတ်မှုန်များနှင့်နေရောင်သတိပေးချက်များကိုရယူပါ။ အဆိုပါမိုးလေဝသ Channel ကိုသငျသညျကိုကြိုတင် 15 ရက်အထိစီစဉ်ကူညီပေးသည်တစ်ခုတိကျမှန်ကန်ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်ပေးပါသည်။
နွေဦးကနေ, ခရီးသွားသို့မဟုတ်မုန်တိုင်းများဘို့အချိန်ကိုဆိုလိုသည်! သင့်ရဲ့ခရီးသွားရာသီဥတုမြေပုံနှင့်တိုက်ရိုက်ရာသီဥတုကရေဒါကိုခြေရာခံများနှင့်နေ, မိုးရွာရွာသို့မဟုတ်ဝတ်မှုန်အဘို့ ပြင်ဆင်. , ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျယ်ပြန့်သောရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်နှင့်မုန်တိုင်းရေဒါမှကျေးဇူးတင်စကား။
track ရာသီဥတုသတိပေးချက် & ကျွန်တော်တို့ရဲ့မုန်တိုင်းရေဒါ! အဆိုပါမိုးလေဝသ Channel ကိုထိပ်တန်း5features တွေရှာဖွေတွေ့ရှိ:
1. သင့်ရဲ့လမ်းမိုးလေဝသ! သင့်ရဲ့နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်းနှင့်အတူ, ကိုယ်ပိုင်ရာသီဥတုမြေပုံအရနှင့်သင်၏နေ့စဉ်အခြေအနေများအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူရန်သစ်တစ်ခုအမြင်အာရုံလမ်းပျော်မွေ့။ ချက်ချင်းထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုတစ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှရေဒါ & ပိုပြီးရှာဖွေတွေ့ရှိ!
တိုက်ရိုက်လွှရာသီဥတုသတင်းကိုခြေရာခံဖို့ Press မှတွန်းအားပေးသတိပေးချက်များကို - သင်ကစာရင်းသွင်းနိုင်သည်ကို2မိုးလေဝသသတိပေးချက်များ!
3. Track မိုးလေဝသသတိပေးချက်များ & အခြေအနေများ - ကျွန်တော်တို့ရဲ့မုန်တိုင်း tracker နှင့်အတူ flash ကိုရေလွှမ်းမိုးမှုများကဲ့သို့ခရီးသွားများနှင့်နွေဦးရာသီဥတုကအဘို့သတိပေးချက်နေပါ, ငါတို့ရာသီဥတုရေဒါများနှင့်မုန်တိုင်း tracker နှင့်အတူရာသီဥတုသတိပေးချက်များကိုခြေရာခံ။
မမျှော်လင့်ဘဲအပူလှိုင်းတံပိုးမှမိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းရာမှ4ပြင်းထန်သောရာသီဥတုသတိပေးချက်များ, ။ နွေဦးထောင့်လှည့်ပတ်ဖြစ်ပါသည် - ကျွန်တော်တို့ရဲ့မုန်တိုင်းရေဒါသင်တို့သည်နောက်ကိစ္စရာသီဥတုဘေးကင်းလုံခြုံနေဖို့လိမ့်မည်နှင့်ရာသီဥတုသတင်းကိုသေချာမည်!
သင်သွားလေရာရာ၌ဝတ်မှုန် & မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်နောက်ဆုံးသတင်းများအဘို့ 5. မိုးလေဝသမြေပုံ, သင်လိုအပ်သမျှအချက်အလက်တွေကိုပေး!
•ကြှနျုပျတို့သစ်ကိုကျွန်တော်တို့ navigation bar နှင့်အတူရာသီဥတုသတင်းကိုမှပိုမြန် access ကိုရယူပါ! သို့မဟုတ်သင်ပိုမိုအကြောင်းအရာအဘို့ဆင်းအဟောင်းအညွှန်းပွတ်ဆွဲပိုနှစ်သက်လျှင်။
•မိုးရေထဲမှာဖမ်းမိရမနေပါနဲ့! ကျွန်ုပ်တို့၏မုန်တိုင်းရေဒါသင်သည်သင်၏လမ်းပစ်ချဘာမှကြံ့ကြံ့ခံကူညီပေးပါမည်။ နေ့စဉ်ခန့်မှန်းချက် Check နှင့်တကွမိုဃ်းရွာ, ထွန်းလင်းသို့မဟုတ်ပင်မိုဃ်းချုန်းလာ, သင်အရာအားလုံးကိုအဘို့ပြင်ဆင်လိမ့်မည်!
•နေ့စဉ်အပူချိန်, လေတိုက်အမြန်နှုန်းနှင့်မိုးလေဝသမြေပုံသင်တစ်ဦးအလင်းဂျာကင်အင်္ကျီ, နေကာမျက်မှန်သို့မဟုတ်သင့်ထီးရောက်စေဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်သင်သိပါစေ!
•အညွှန်းကိန်းကို run နှင့်အတူစမတ် Run! အပူချိန်ခွဲခြားစိတ်ဖြာနှင့်သင့်စုံလင်သောလမ်းကြောင်းစီစဉ်ကူညီပေးဖို့အသေးစိတ်လေတိုက်နှုန်း updates များကိုဆန်းစစ်အားဖြင့်အကောင်းဆုံးပြေးအခြေအနေများရှာဖွေလိုက်ပါ!
•ဝတ်မှုန်စိုးရိမ်ကြောင်း? သင်သည်ထိုသူတို့ရိုက်နှက်ကူညီရန် High-အန္တရာယ်တည့်မှုသတိပေးချက်များနှင့်ဆေးဝါးအကြံဉာဏ်ကိုရယူပါ!
•ကြှနျုပျတို့ရာသီဥတုကရေဒါများနှင့်မုန်တိုင်း tracker နှင့်အတူအစွန်းရောက်ဖြစ်ရပ်များစဉ်အတွင်းလုံခြုံနေပါ။ Wildfire မှစ. မိုဃ်းချုန်းဖို့ပြင်းထန်သောမုန်တိုင်းများမှကျနော်တို့ကျွမ်းကျင်သူဘေးကင်းလုံခြုံမှုအကွံဉာဏျအတူသင်တို့သည်ငါတို့၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှရေဒါပေါ်မှာအခြေခံပြီးရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်ပေးပို့ပါလိမ့်မယ်။
•ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်ရှင်သောရေဒါဝတ်မှုန်များနှင့် In-depth ကိုအပူချိန်အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူ, သင်နွေဦးဓာတ်မတည်သို့မဟုတ်တစ်နှောင်းပိုင်းတွင်အအေးရိုက်နှက်ကူညီပေးပါမည်။
• Kait က Parker, Apple က podcasts များသည်အင်္ဂါနေ့နှင့်အတူ "လက္ခဏာတွေနွေး" ထွက်ကိုစစ်ဆေးပါ။
Access ကိုသငျသညျပြည်တွင်းနှင့်ခရီးသွားရာသီဥတုအဖြစ်အပူချိန်နှင့် ပတ်သက်. လိုအပ်သမျှအချက်အလက်တွေကို။
•သင်တစ်နေရာတည်းတွင်ဂရုစိုက်အားလုံးရာသီဥတု data တွေကိုရှာပါ: သင်၏မတ်ပင်မမျက်နှာပြင်!
•ခန့်မှန်းချက်ကိုကြည့်ပါနဲ့ကိုယ့် $ 0.99 အဘို့ကြော်ငြာအဆင်မပြေမရှိဘဲသင်၏တစ်နေ့တာစီစဉ်ထားသည်။
တပ်လှန့်ဖြစ်နှင့်သင်စီစဉ်ထားဖို့လိုပါတယ်အချက်အလက်တွေအားလုံးကိုရယူပါ။ လေတိုက်နှုန်း, မိုဃ်းချုန်းနှင့်တိုက်ရိုက်ပြမြေပုံများအကြောင်းကိုတိုက်ရိုက်သတင်းသင်သည်သင်၏တစ်နေ့တာထဲကအများဆုံးစေနိုင်သည်ဟုဆိုလို!
သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ် tablet ကိုတိုက်ရိုက်ကယ်နှုတ်တော်မူ၏ကြီးတွေသို့မဟုတ်သေးငယ်မည်သည့်ရာသီဥတုသတိပေးချက်အရယနေ့အဆိုပါမိုးလေဝသ Channel ကို Download လုပ်ပါ။ သတ္တိပြင်းထန်သောမုန်တိုင်းများသို့မဟုတ်နွေဦးရင်ဆိုင်ရအပြည့်အဝလွယ်ကူဖြစ်နိုင်ဘူး prepared-!
Privacy & တုံ့ပြန်ချက်
•သုံးစွဲမှုကျွန်ုပ်တို့၏စည်းကမ်းချက်များကိုဤနေရာတွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည် http: //www.weather.com/common/home/legal.html
•သင်သည်ငါတို့ရာသီဥတုဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်မေးခွန်းများကိုသို့မဟုတ်အကြံပြုချက်များရှိပါက android.support@weather.com မှာအဆက်အသွယ်ရဖို့တွန့်ဆုတ်ကြဘူးပါ။
သဘာဝတရား၏တစ်အင်အားစုဖြစ်လိမ့်မည်။ ယခုအဆိုပါမိုးလေဝသ Channel ကို app ကိုအပ်ဒိတ်လုပ်ပါ။
Weather Maps & Storm Radar - The Weather Channel အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Weather Maps & Storm Radar - The Weather Channel အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Weather Maps & Storm Radar - The Weather Channel အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Weather Maps & Storm Radar - The Weather Channel အား အခ်က္ျပပါ
zakanuva စတိုး 20 22.61k
Weather Maps & Storm Radar - The Weather Channel ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Weather Maps & Storm Radar - The Weather Channel အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 9.10.0
ထုတ်လုပ်သူ The Weather Channel
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.weather.com/common/home/privacy.html
App Name: Weather Maps & Storm Radar - The Weather Channel
Release date: 2019-06-28 14:37:48
လက်မှတ် SHA1: 98:A6:8A:C9:7C:A5:42:B8:AA:18:A3:CA:E7:C6:02:17:BD:E9:76:D1
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Jonathon Sodos
အဖွဲ့အစည်း (O): The Weather Channel Interactive
နယ်မြေ (L): Atlanta
Weather Maps & Storm Radar - The Weather Channel APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ